२०७६ असोज ९ बिहीबार, राशिफल – Horoscope – Radio Prabhav 92.4 Mhz
September 26, 2019 गृहपुष्ठ
२०७६ असोज ९ बिहीबार, राशिफल – Horoscope
वि.सं. २०७६ असोज ९। बिहीबार। इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर २६। ने.सं. ११३९ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष द्वादशी, ७:३३ बजेदेखि त्रयोदशी, २९:१३ उप्रान्त चतुर्दशी। सूर्योदय– ५:५४ बजे, सूर्यास्त– १७:५५ बजे चन्द्रराशि– सिंह
छिटो फल प्राप्त गर्ने आकांक्षाले समस्या निम्त्याउनेछ। अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। अवसर आए पनि नयाँ काममा हातहाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला। अप्ठ्यारो स्थितिबाट बच्न परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। समयको मागअनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ। बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। नियमित काम भने सम्पादन हुनेछ।
वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। तापनि मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। बुद्धिले काम लिँदा योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला।
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश काममा समस्या पर्नेछ। आफ्ना लागि छुट्याइएको वस्तु समेत उपभोग गर्न बाधा पर्नेछ। बेसुरको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ। आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। काम बनाउन दोहोर्याएर प्रयास गर्नुपर्ला। तापनि मिहिनेत गर्दा स्थितिमा सुधार आउनेछ। आफ्नो सूचना बाहिरिन सक्छ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
अस्वस्थताले काममा खट्न समस्या पर्नेछ। कमजोरीले चिन्ता बढाउनेछ भने परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। आफ्ना विषयमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। लगनशीलताले मात्र संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा समाजसेवामूलक काम गर्न सकिनेछ। व्यवसाय तथा आम्दानी हुने काममा भने अलमल हुने देखिन्छ।
नेपाल एक दिवसीय वरीयतामा एक स्थान तल
अमेरिकामा सवारी दुर्घटना, दुई नेपालीको मृत्यु